China Distal Fibular Locking Plate စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Shuangyang
Multi-axial Distal ပေါငျရိုးအသော့ခတ်ပြား
Humerus သော့ခတ်ပြား Multi-axial လည်ပင်း
.08.0 စီးရီးပြင်ပ fixation Fixator - Proxim ...
maxillofacial စိတ်ဒဏ်ရာ mini ကို arc ပန်းကန်
ခန္ဓာဗေဒ orbital ကြမ်းပြင်ပန်းကန်
1.5 Self- တူးဖော်ဝက်အူ
ခန္ဓာဗေဒတိုက်တေနီယမ်ကွက် -2D ပတ်ပတ်လည်အပေါက်
Distal Fibular သော့ခတ်ပြား
Distal ရှေ့ဘက်ခြမ်း Fibular သော့ခတ် Plate-I အမျိုးအစား
Distal anterior နှစ် ဦး နှစ်ဖက် fibular စိတ်ဒဏ်ရာသော့ခတ်ပန်းကန် distal နှင့် fibular ရိုးတံတလျှောက်နှစ် ဦး စလုံးတစ်ခုခန္ဓာဗေဒပုံသဏ္andာန်နှင့်ပရိုဖိုင်းကို feature ဖြစ်ပါတယ်။
3. မျက်နှာပြင် anodized;
၅။ Combi- အပေါက်သည်သော့ခတ်သောဝက်အူနှင့် cortex ဝက်အူနှစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Distal anterior နှစ် ဦး နှစ်ဖက် fibular သော့ခတ် implant ပန်းကန်, အထူးသဖြင့် osteopenic အရိုးအတွက်ကျိုး, osteotomies နှင့် distal fibular ၏ diaphyseal ဒေသ၏ nonunions များအတွက်ညွှန်ပြ။
၃.၀ စီးရီးခွဲစိတ်ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်ကိုက်ညီသော .03.0 သော့ခတ်ဝက်အူΦ3.0 cortex ဝက်အူအတွက်အသုံးပြုသည်။
ကျန်4တွင်း
ညာဘက်4ပေါက်
လက်ဝဲ5တွင်း
ညာဘက်5ပေါက်
ကျန်6တွင်း
ညာဘက်6ပေါက်
လက်အောက်7ပေါက်
ညာဘက် ၇ ကျင်း
ကျန် 8 တွင်း
ညာဘက် 8 ပေါက်
Distal posterior ဘေးထွက် Fibular သော့ခတ် Plate-II ကိုအမျိုးအစား
Distal posterior နှစ် ဦး နှစ်ဖက် fibular သော့ခတ်ပန်းကန် implants distal နှင့် fibular ရိုးတံတလျှောက်နှစ် ဦး စလုံးတစ်ခုခန္ဓာဗေဒပုံသဏ္andာန်နှင့်ပရိုဖိုင်းကို feature ဖြစ်ပါတယ်။
Distal posterior နှစ် ဦး နှစ်ဖက် fibular အရိုးအထူးကုအရိုးအထူးကု osteopenic အရိုးအတွက်ကျိုး, osteotomies နှင့် distal fibular ၏ diaphyseal ဒေသ၏ nonunions များအတွက်ညွှန်ပြနှစ် ဦး နှစ်ဖက် fibular အရိုးသော့ခတ်ပန်းကန်။
s3.0 သော့ခတ်ဝက်အူΦ3.0 cortex ဝက်အူအတွက်အသုံးပြုသည်၊
Distal ဘေးထွက် Fibular သော့ခတ် Plate-III အမျိုးအစား
Distal နှစ် ဦး နှစ်ဖက် fibular စိတ်ဒဏ်ရာသော့ခတ်ပန်းကန် distal နှင့် fibular ရိုးတံတလျှောက်နှစ် ဦး စလုံးတစ်ခုခန္ဓာဗေဒပုံသဏ္andာန်နှင့်ပရိုဖိုင်းကို feature ဖြစ်ပါတယ်။
1. မျက်နှာပြင် anodized;
Distal နှစ် ဦး နှစ်ဖက် fibular သော့ခတ်ပန်းကန်အထူးသဖြင့် osteopenic အရိုးအတွက်ကျိုး, osteotomies နှင့် distal fibular ၏ diaphyseal ဒေသ၏ diaphyseal ဒေသ၏ nonunions များအတွက်ညွှန်ပြ။
၃.၀ စီးရီးအရိုးအထူးကုကိရိယာနှင့်ကိုက်ညီသော .03.0 သော့ခတ်ဝက်အူΦ3.0 cortex ဝက်အူအတွက်အသုံးပြုသည်။
သော့ခတ်ထားသောပန်းကန်သည်အဆင့်မြင့်သော်လည်းအထူးသဖြင့်မကြာသေးမီကအရိုးအထူးကုခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်၏အရိုးပွရောဂါဆိုင်ရာနည်းစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သို့သော်သော့ခတ်ပန်းကန်ကိုယ်နှိုက်၏အယူအဆကိုမကြာခဏနားလည်မှုလွဲနေပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်ပင်လွဲမှားစွာဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်သော့ခတ်ထားသောပန်းကန်သည်ပြင်ပတပ်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့ပြုမူသည်။ သို့သော်ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးများ၏ transfixion တွင်သာမက၎င်း၏စက်ပြင်စက်များနှင့်ဆိပ်ပျံ့နှံ့ခြင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များအပြင်ပြင်ပစနစ်၏အားနည်းချက်များမရှိဘဲပြုမူသည်။ တကယ်တော့ဒါဟာ "အတွင်းပိုင်း fixator" ပဲ။
အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများနှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အမျိုးမျိုးသောတိုက်တေနီယမ်အရိုးပြားများကိုအရိုး၏ခွဲစိတ်မှုပုံစံနှင့်အရိုးခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များရွေးချယ်ရာတွင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေရန်အသုံးပြုမှုနေရာနှင့်အရိုး၏ခန္ဓာဗေဒပုံသဏ္accordingာန်အရဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တိုက်တေနီယမ်ပြားကို AO မှအကြံပြုသောတိုက်တေနီယမ်ပစ္စည်းနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီး cranial-maxillofacial, clavicle, ခြေလက်နှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းကျိုးပဲ့ခြင်းများအတွင်းပိုင်းအတွက်တပ်ဆင်ရန်သင့်လျော်သည်။
တိုက်တေနီယမ်အရိုးပြား (သော့ခတ်ထားသောအရိုးပြားများ) သည်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံနှင့်မတူသောအရိုးပြားများနှင့်အထူကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
တိုက်တေနီယမ်အရိုးပြား (သော့ခတ်ထားသောအရိုးပြား) ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အတွင်းခန်းပြင်ခြင်း၊ ခြေလက်အင်္ဂါများနှင့်မမှန်သောအရိုးကျိုးခြင်းများသို့မဟုတ်အရိုးချွတ်ယွင်းခြင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ အသုံးပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ သော့ခတ်နိုင်သောအရိုးပြားကိုတည်ငြိမ်ပြီးမြဲမြံသောအတွင်းပိုင်း fixation ပံ့ပိုးမှုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန်သော့ခတ်ဝက်အူနှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ ထုတ်ကုန်ကိုပိုးကင်းသောထုပ်ပိုးမှုတွင်ထည့်ပြီးတစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။
အရိုးပွရောဂါအရိုးများသို့မဟုတ်အပိုင်းအစများစွာပါရှိသောအရိုးကျိုးမှုများတွင်သမားရိုးကျဝက်အူများဖြင့်အရိုးဝယ်ယူမှုကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ လူနာ၏ဝန်ကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်သော့ခတ်များသည်အရိုး / ပြားချုံ့ခြင်းအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိသော်လည်းသေးငယ်သည့်ထောင့်လွင့်ကျောက်ပြားများနှင့်အလားတူအလုပ်လုပ်သည်။ အရိုးပွရောဂါအရိုး (သို့) multifragmentary အရိုးကျိုးမှုများတွင် screw မ်ားအား fixed-angle တည်ဆောက်မှုသို့သော့ခတ်နိုင်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အရိုးပြားတွင်သော့ခတ် screw နှစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပုံသေထောင့်တည်ဆောက်မှုကိုပြုလုပ်သည်။
ဒါဟာသော့ခတ်ပြားနှင့်အတူ Proximity humerus ကျိုး၏ fixation နှင့်အတူကျေနပ်အလုပ်လုပ်တဲ့ရလဒ်ကိုရှိကွောငျးကောက်ချက်ချပါတယ်။ ကျိုးများအတွက်ပြားကို fixation ကိုအသုံးပြု။ နေစဉ်, ပန်းကန်အနေအထားအစွမ်းကုန်အရေးပါသည်။ ထောင့်တည်ငြိမ်မှုရှိခြင်းကြောင့်သော့ခတ်ထားသောပြားများသည် Proximity humeral fracture ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် implants များဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ သုံးပုံတစ်ပုံ Tubular သော့ခတ်ပြား
နောက်တစ်ခု: Calcaneal သော့ခတ်ပြား
Plate implants သော့ခတ်
6.5 Cannulated သော့ခတ်ဝက်အူ
Multi-axial Medial Tibia Plateau သော့ခလောက်ပြား ...
Multi-axial ဘေးဘက် Tibia ကုန်းပြင်မြင့်သော့ခလောက် ...
Volar သော့ခတ်ပြား - အသေးစား & အကြီးစား
လိပ်စာ:Shuangyang Building, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China